Madaxtooyada Puntland ee Garoowe oo lagu xusay munaasabada 1daluulyo+sawiro – SBC
Madaxtooyada Puntland ee Garoowe oo lagu xusay munaasabada 1daluulyo+sawiro
Magaalada Garoowe Caasimada Puntland siiba Madaxtooyada Magaaladaas ee Dowlada Puntland waxaa ka dhacay habeen nimadii xalay Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna xusayay sanadguurada 53aad ee midnimadii Soomaaliweyn.
Madaxda Dowalda Puntland oo uu ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka Puntland, Xubnaha labada golse ee dowlada iyo weliba Marti sharaf kale oo aad u tiro badan islamarkaana leh, Waxgarad, Aqoonyahano, Abwaaniin iyo weliba culimo ayaa goobta ku sugnaa.
Waxaa Xusid mudan oo iyana goobta ku soo bandhigay Suugaan Aad u xiiso leh oo nooc walba leh dadkii halkaasi ku sugnaana aad ay uga heleen fanaaniinta hobolada Waaberi Puntland .
Abwaano uu ka mid yahay Abwaan Jaamac Kadiye iyo Maamo Xaliimo Puntland ayaa iyana goobta ku soo bandhigay Gabayo iyo Buraanburo taabanaya xornimada waxa ay tahay iyo gumeysiga dhibaatada xooga leh ee uu laayahay, waxaana dhinaca kale uu abaarayay suugaantooda munaasabadan qiimaha badan ee ay u leedahay umada Soomaaliyeed.
Madaxda goobta ku sugnayd oo ay ka mid ahaayeen wasiirada xukuumada ayaa iyana goobta ka jeediyay Qudbado aad u muhiimsan islamarkaana ku aadan xafladan qiimaha badan ee 1da Luulyo.
Ugu dambeyntii waxa musanaasabadaasi Soo gunaanuday Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen C/samad Cali Shire isagoo qudbadiisa halkaas uu ka jeediyay ku taa taabtay dhinacyo badan oo siyaasada Iminka ee Soomaaliya ay ku jirto ay ka mid aheyd.
Waxa uu ugu horeyn ka sheekeeyay xornimadii dalka waxii ka dambeeyay ee ay soomaaliya Soo martay, sidii ay ugu hanweyneyd Soomaalida uguna daneyn jirtay taariikhda maanta oo kale iyo weliba dhacdooyinkii darnaa ee ka dambeeyay.
Dhamaadkiina xaflada waxaa la saaray calanka iyadoo halkaasi ay ku soo bandhigeen gaada ka ciyaar ciidamada Xooga Puntland iyo kuwa baanbeyda qaraaca.